သူများတွေ ရှုတင်တွေရိုက်နေချိန်မှာ သူကျ ဘာလို့မရိုက်ရတာလဲဆိုပြီး ဝမ်းနည်းနေတဲ့ သားညီ – Suehninsi
သူများတွေ ရှုတင်တွေရိုက်နေချိန်မှာ သူကျ ဘာလို့မရိုက်ရတာလဲဆိုပြီး ဝမ်းနည်းနေတဲ့ သားညီ
သားညီကတော့ အစ်ကိုဖြစ်သူ ဒွေးနဲ့ ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ဒွေးကွယ်လွန်သွားချိန်မှာတော့ အောင်မြင်တဲ့ နေရာတစ်နေရာကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သားညီက နောက်ပိုင်းမှာ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အဖြစ်ပါ
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ကူးလာပြီး ခိုင်မာတဲ့ နေရာတစ်နေရာကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း သားညီရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို အရင်ကလိုပဲ ဆက်လက်အားပေးနေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ကပ်ရောဂါအခြေအနေကြောင့် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းတွေရပ်နားထားတဲ့ သားညီက
သူများတွေ လုပ်ငန်းခွင်အသီးသီးဝင်နေကြပြီး ရှုတင်တွေရိုက်နေချိန်မှာ သူကျရုပ်ရှင်မရိုက်ရတဲ့အဖြစ်လေးကို ဝမ်းနည်းနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သားညီက “သူများတွေ Shooting ဆိုပြီး My Day တွေ တင်တာတွေ့ရင် ငါကျ ဘာလို့ရိုက်လို့မရတာလဲဆိုပြီး သိပ်သိချင်မိတယ် !!!” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့အဖြစ်လေးကို ပြောလာပါတယ်။ သားညီကတော့ အနုပညာသမားတစ်ယောက်ပီပီ အလုပ်တွေကို
ပြန်လည်စတင်ချင်နေပြီဖြစ်ပေမယ့် အခြေအနေက အခွင့်အရေးမပေးသေးတာကြောင့် အလုပ်တွေ ရပ်နားထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးကလည်း သားညီတစ်ယောက် အရင်လို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ အမြန်ဆုံးရိုက်ကူးရဖို့ ဆုတောင်းပေးကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
သားညီကတော့ အဈကိုဖွဈသူ ဒှေးနဲ့ ရုပျရှငျဗီဒီယိုဇာတျကားတှေ ရိုကျကူးခဲ့ပွီး ဒှေးကှယျလှနျသှားခြိနျမှာတော့ အောငျမွငျတဲ့ နရောတဈနရောကို ရရှိပိုငျဆိုငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ သရုပျဆောငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ သားညီက နောကျပိုငျးမှာ ဒါရိုကျတာတဈယောကျအဖွဈပါ
ရုပျရှငျဇာတျကားတှေ ရိုကျကူးလာပွီး ခိုငျမာတဲ့ နရောတဈနရောကို ရရှိပိုငျဆိုငျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှကေလညျး သားညီရဲ့ လှုပျရှားမှုတိုငျးကို အရငျကလိုပဲ ဆကျလကျအားပေးနကွေဆဲ ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာ ကပျရောဂါအခွအေနကွေောငျ့ ရုပျရှငျရိုကျကူးခွငျးတှရေပျနားထားတဲ့ သားညီက
သူမြားတှေ လုပျငနျးခှငျအသီးသီးဝငျနကွေပွီး ရှုတငျတှရေိုကျနခြေိနျမှာ သူကရြုပျရှငျမရိုကျရတဲ့အဖွဈလေးကို ဝမျးနညျးနတောကို တှရေ့ပါတယျ။ သားညီက “သူမြားတှေ Shooting ဆိုပွီး My Day တှေ တငျတာတှရေ့ငျ ငါကြ ဘာလို့ရိုကျလို့မရတာလဲဆိုပွီး သိပျသိခငျြမိတယျ !!!” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့အဖွဈလေးကို ပွောလာပါတယျ။ သားညီကတော့ အနုပညာသမားတဈယောကျပီပီ အလုပျတှကေို
ပွနျလညျစတငျခငျြနပွေီဖွဈပမေယျ့ အခွအေနကေ အခှငျ့အရေးမပေးသေးတာကွောငျ့ အလုပျတှေ ရပျနားထားရတာ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးကလညျး သားညီတဈယောကျ အရငျလို ရုပျရှငျဇာတျကားတှေ အမွနျဆုံးရိုကျကူးရဖို့ ဆုတောငျးပေးကွပါဦးနျော။ ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
Source : Thar Nyi’s Facebook
မီးမီးခဲ ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာ သတင်းမှားဖြစ်ပြီး နေပြန်ကောင်းလာဖို့ ဆုတောင်းပေးကြဖို့ ပရိသတ်တွေကို တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ ထူးအယ်လင်း
မှော်ဘီက မိဘမဲ့ဂေဟာမှာ စားသောက်ကုန်တွေ လှူဒါန်းရင်း ကလေးတိုင်းကို မုန့်ဖို့း(၅)ထောင် ဝေပေးခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေး